Sina 1.61 Blue Block UV420 HMC OPTICAL LENS fanamboarana sy orinasa | Hongchen
Toerana niaviany: CN; JIA Marika: Hongchen
Laharana modely: 1.61 Lensa fitaovana: plastika
Vokatry ny fahitana: Fahitana tokana Coating: HMC
Lio-mololo: Mazava Diameter: 65/70 / 75mm
Index: 1.61 Loko manarona: MAZAVA
Fitaovana: KOC Function: Fiarovana UV
Anaran'ny vokatra: mpanamboatra solomaso optika any Shina MOQ: mpivady 1
Fonosana: OEM Fotoana fandefasana: 15-30 Andro
Safidy firakotra: MAITSO / BLUE
Ireo fitaovana fitaratra dia voasokajy ao amin'ny index bias. Ity index bias ity dia ny tahan'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana rehefa mandehandeha amin'ny rivotra amin'ny hafainganam-pandehan'ny hazavana izy rehefa mamakivaky ireo fitaovana fitaratra. Izy io dia famantarana ny haben'ny hazavana miondrika rehefa mandehandeha amin'ny masolavitra izy. Ny jiro dia miverina, na miondrika, eo amin'ny tampon'ilay solomaso, avy eo rehefa mivoaka ilay solomaso. Noho izany ny solomaso dia azo atao manify, ary maivana koa.
1.61 Index lehibe
Ho an'ireo izay mitady endrika maoderina kokoa dia mety ho mifanaraka amin'ilay volavolan-dalàna fotsiny ireo lantina 1.61 avo lenta. Ireo solomaso somary manify ireo dia mety amin'ny zana-kazo na solomaso somary manify izay manana fanitsiana SPH eo anelanelan'ny +/- 4.25 sy +/- 6.75, ary ny fanitsiana CYL eo anelanelan'ny +/- 2.25 sy +/- 3.00
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny lantom-panondro avo?
Miaraka amin'ny solomaso solomaso matetika, mihabe ny afovoan'ny solomaso ary matevina kokoa ny sisiny ivelany hanamorana ny famerenam-bolo izay mahatonga ny solomaso resahina! Ny lantom-panondro avo lenta dia manana index reflexion avo kokoa noho ny lens tsy tapaka, izay midika fa tsy mila matevina manodidina ny sisiny vao mahomby.
Ny masom-bolo avo lenta dia midika fa ny solomaso mihitsy dia mety ho mahia sy maivana kokoa. Io dia mamela ny solomaso ho lamaody sy ahazoana aina araka izay azo atao. Ny lantom-panondro avo lenta dia mahasoa indrindra raha toa ka manana solomaso mahery amin'ny maso tsy fahitana, fahitana lavitra, na astigmatisme ianao. Na izany aza, na dia ireo manana solomaso ambany solomaso aza dia afaka mahazo tombony amin'ny lantom-panondro avo lenta.
Fanaterana & famonosana
Valopy (Ho an'ny safidy):
1) valopy fotsy mahazatra
2) mandrakotra ny marika "Hongchen" anay
3) OEM no mandrakotra ny Logo an'ny mpanjifa
Baoritra: baoritra mahazatra: 50CM * 45CM * 33CM (Ny boaty rehetra dia mety misy tsiro aroud 500 ~ 600 tsiroaroa vita amin'ny tsiroaroa, 220pairs solomaso efa tapitra. 22KG / CARTON, 0.074CBM)
Seranan-tsambo akaiky indrindra: seranan-tsambo Shanghai
Ora nanomezana :
1 ~ 7 andro
10 ~ 20 andro
20 ~ 40 andro
Raha manana fepetra takiana manokana ianao, afaka mifandray amin'ny mpivarotra, afaka manao serivisy serivisy rehetra toa ny marika Domestic izahay.
Fandefasana entana sy fonosana
VOKATRA VISION CUTRE BLUE
PHOTOCHROMIC tsy misy
MATERIAL MATERIAL KOC
Fanoherana ny ABRASION 6-8H
savaivony 65/70 / 75mm
Izy io dia manome fiarovana amin'ny masoandro any ivelany, miverina manana ambaratonga ambany kokoa amin'ny fidirana ao anaty
Azo ampiasaina mitovy tsara mandritra ny taona, amin'ny toetrandro rehetra ary amin'ny hetsika maro samihafa
Fepetra fandoavana sy fandefasana
Seranan-tsambo FOB SHANGHAI
MOQ Tsiroaroa 1000
Fahaizana manome 5000 tsiroaroa isan'andro
Power Range SPH: 0 ~ -15.00 CYL: 0 ~ -2.00
Izy io dia miaro ny masonao amin'ny karazana areti-maso amin'ny alàlan'ny fitiliana tanteraka ny taratra UV Antoka 1 taona
Inona ilay hazavana manga?
Ho an'ny tanjon'ity lahatsoratra ity dia hifantoka amin'ny jiro manga izahay, iray amin'ireo loko marobe amin'ny hazavana hita maso rehetra.
Ny jiro manga dia novokarin'ny masoandro voajanahary fa avy amin'ny mpanara-maso solosaina, efijery smartphone ary fitaovana nomerika hafa. Ho fanampin'ireny, ny jiro manga dia novokarin'ny jiro LED sy ny fluorescent ary ny jiro manjelanjelatra. Ilaina ny jiro manga amin'ny fitazonana ny torimaso sy ny fifohazanao, ny toetranao ary ny fihazonana ny fitadidianao ho maranitra.
Vokany manimba amin'ny fahazavana manga
Mino izany na tsia, fa ankehitriny, saika ny olona rehetra dia iharan'ny Computer Vision Syndrome (CVS), toe-javatra iray izay ateraky ny fifantohana amin'ny masonao amin'ny solosaina na any amin'ny gadget na inona na inona mandritra ny ora maro. Ny miasa tsy tapaka amin'ny takelaka nomerika dia midika hoe mifantoka sy mampifantoka ny masonao hatrany hatrany. Mahatonga ny maso eyestrain, maina sy miraikitra.
Ny tombo-tsoa azo avy amin'ny lantom-boasary manga
Blue Cut Lensa dia ny manakana sy miaro ny masonao amin'ny fipoahan'ny hazavana manga mahery vaika. Ny solomaso voapaika manga dia manakana ny 100% UV sy ny 40% ny jiro manga, mampihena ny fisian'ny retinopathy ary manome fanatsarana ny fahitana maso sy ny fiarovana ny maso, ahafahan'ny mpihinana mankafy ny tombony azo avy amin'ny fahitana mazava kokoa sy maranitra, tsy misy fanovana na fanodikodinana ny fomba fahitana loko.
Inona marina no ataon'ny Hongroà Lens an'i Hongchen
1) Miaro ny masonao tsy hijery vokadratsin'ny fahazavana manga ateraky ny ora fiasana maharitra amin'ny solosaina, solosaina finday na finday ny masolanty voadio manga manohitra ny famirapiratana.
2) Mety atahorana kokoa ny karazana homamiadana sasany.
3) Loza ambany noho ny diabeta, aretim-po ary tsy fahatomombanana.
4) Ataovy izay hahatsapanao ho engertika rehefa vitanao ny ela niasana alohan'ny solosaina.
5) Ataovy miodina tsimoramora ny masonao.
Maninona no ilaintsika ny solomaso manapaka manga?
Ny vokatra mahazatra indrindra amin'ny fipoahan'ny jiro manga be loatra dia ny fihenan'ny maso, ny fahitana manjavozavo ary ny aretin'andoha. Na izany aza, ny fandalinana natao tato ho ato dia nifantoka tamin'ny fiatraikany ratsy tamin'ny fahazavana manga tamin'ny gadona sirkadianina ary nahita fa ny fijerena fahitalavitra na ny fampiasana takelaka alohan'ny hatory, ohatra, dia mety hiteraka tsy fitoniana sy fanelingelenana tsingerin'ny torimaso. Amin'ny toe-javatra faran'izay mafy, ny fahazavana be loatra amin'ny manga dia mety hitarika fahasimbana amin'ny maso maharitra sy fahaverezan'ny fahitana aza.
Ny ankizy dia marefo indrindra satria ny masony mbola tsy namorona fiarovana voajanahary amin'ny hazavana manga UV sy HEV. Androany, 97 isan-jaton'ny ankizy amerikana latsaky ny efatra taona no mampiasa fitaovana finday, ary ny tanora dia mandany 6,5 isan'andro eo amin'ny écran. Ankehitriny ny ankizy mampiasa fitaovana nomerika bebe kokoa ao an-trano sy any an-tsekoly manomboka amin'ny fahatanorany, dia zava-dehibe ny fiarovana ny masony araka izay azo atao.
ataovy mora ampanaovina ary azo sorohana ny masolavitra tsy misy sarona
Famonoana AR / firakotra marobe:
arovy tsara ny solomaso amin'ny fisaintsainana, manatsara ny fiasa sy ny fiantrana ny fahitana anao
Fonosana super hydrophobic:
ataovy tsy tantera-drano, antistatic, anti slip ary fanoherana ny solika ny solomaso
Teo aloha: 1.56 manga manakana ny mason-tsarimihetsika hmc mandroso
Manaraka: Lensa optika 1.67 MR-7 Block Block UV420 HMC
1.61 Antivirus Blue Block HMC Green Coating Opt ...
Indeks avo 1.61 manohitra ny masonkarena manga block asp hmc o ...
1.56 Antivirus Blue Block HMC Green Coating Opt ...
1.56 manga manakana ny mason-tsarimihetsika hmc mandroso